Zvaungaita Kuti Unamate Mwari Uye Uswedere Pedyo Naye | Swedera Pedyo
1-3. (a) Tingadzidzei pamusoro pemaitiro evanhu nokucherechedza kubata kunoita vabereki mwana wavo mucheche? (b) Chii chinongoitika choga kana mumwe munhu akatiratidza rudo, uye mubvunzo upi unokosha watingazvibvunza?
VABEREKI vanofarira kuona mucheche wavo achangoberekwa achinyemwerera. Vanowanzoisa zviso zvavo pedyo nechiso chomucheche, vachimurezva nokunyemwerera chaizvo. Vanoda kwazvo kuona zvaanoitawo. Uye pasina nguva, vanozviona—matama omucheche anodzoka mukati, kumwekurira miromo yake, uye vobva vaona kachinyemwerera zvinofadza. Munzira yakwo duku, kunyemwerera ikoko kunenge kunoratidza rudo, rudo runotanga kuratidzwa nomucheche mukupindura rudo rwevabereki.
2 Kunyemwerera kwekacheche aka kunotiyeuchidza nezvechimwe chinhu chinokosha pamusoro pemaitiro evanhu. Sevanhu tikaratidzwa rudo tinoratidzawo rudo. Iwayo ndiwo masikirwo atakaitwa. (Pisarema 22:9) Sezvatinokura, tinokurawo mukukwanisa kwedu kuratidza rudo. Zvimwe ungayeuka kubva pawaiva mwana nzira iyo vabereki vako, hama kana kuti shamwari vaikuratidza nayo rudo. Mumwoyo mako makadyarwa manzwiro oushamwari, akakura, uye akatumbuka kuva chiito. Wakaratidzawo rudo rwako. Zvimwe chete izvozvo zviri kuitikawo here muukama hwako naJehovha Mwari?
3 Bhaibheri rinoti: “Kana tiri isu, tinoda, nokuti akatanga kutida.” (1 Johani 4:19) MuChikamu 1 kusvika kuChikamu 3 mubhuku rino, wakayeuchidzwa kuti Jehovha Mwari akashandisa simba rake, ruramisiro yake, nouchenjeri hwake nenzira yorudo kuti zvikubatsire. Uye muChikamu 4, wakaona kuti akaratidza rudo rwake zvakananga kuvanhu—uye kwauri iwe pachako—munzira dzinoshamisa. Zvino panova nomubvunzo. Neimwe nzira, ndiwo mubvunzo unokosha kupfuura yose waungazvibvunza: ‘Ndichaitei norudo rwaJehovha?’
Zvazvinoreva Kuda Mwari
4. Munzirai umo vanhu vakavhiringidzika pamusoro pezvinoreva kuda Mwari?
4 Jehovha Muvambi worudo, anonyatsoziva kuti rudo rune simba guru rokuita kuti vamwe vaite zvakanakisisa. Naizvozvo pasinei nokumukira kunoramba kuchiitwa nevanhu vasina kutendeka, akaramba aine chivimbo chokuti vamwe vanhu vaizoita chimwe chinhu norudo rwake. Uye zvechokwadi mamiriyoni akadaro. Zvisinei, zvinosiririsa kuti zvitendero zvenyika ino yakaipa zvakasiya vanhu vavhiringidzika pamusoro pokuti zvinorevei kuda Mwari. Vanhu vasingaverengeki vanoti vanoda Mwari, asi vanoratidza sevanofunga kuti rudo rwakadaro anongova manzwiro anofanira kuratidzwa nemashoko. Kuda Mwari kungatanga nenzira iyoyo, kungofanana norudo rwekacheche kuvabereki vako rungatanga kuratidzwa nokunyemwerera. Zvisinei, kuvanhu vakuru, rudo runosanganisira zvakawanda.
5. Bhaibheri rinorondedzera sei kuda Mwari, uye nei rondedzero iyoyo ichifanira kutifadza?
5 Jehovha anorondedzera zvazvinoreva kumuda. Shoko rake rinoti: “Kuda Mwari kunoreva izvi, kuti tichengete mirayiro yake.” Saka kuda Mwari, kunofanira kuratidzwa nezviito. Chokwadi, vazhinji havanzwi pfungwa yokuteerera ichivafadza. Asi ndima imwe iyoyo nomutsa inowedzera kuti: “Asi mirayiro yake [Mwari] hairemi.” (1 Johani 5:3) Mitemo yaJehovha nenhungamiro zvakaitirwa kutibatsira, kwete kutidzvinyirira. (Isaya 48:17, 18) Shoko raMwari rizere nenhungamiro dzinotibatsira kuswedera pedyo naye. Zvakadaro sei? Ngationgororei zvinhu zvitatu paukama hwedu naMwari. Izvozvi zvinosanganisira kukurukurirana, kunamata, uye kutevedzera.
6-8. (a) Tingateerera Jehovha munzira dzipi? (b) Tingaita sei kuti Magwaro ave mapenyu patinoaverenga?
6 Chitsauko 1 chinotanga nomubvunzo wokuti, “Ungafungidzira uchitaurirana naMwari here?” Takaona kuti iyi yakanga isiri pfungwa yokungofungidzira. Mosesi, akatova nekurukurirano yakadaro. Zvakadini nesu? Ino haisi nguva yokuti Jehovha atumire ngirozi dzake kuti dzikurukurirane nevanhu. Asi Jehovha ane nzira yakanaka kwazvo yokukurukurirana nesu nhasi. Tingateerera Jehovha sei?
7 Nokuti “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari,” tinoteerera Jehovha nokuverenga Shoko rake, Bhaibheri. (2 Timoti 3:16) Mambo Dhavhidhi naizvozvo akakurudzira vashumiri vaJehovha kuita kuverenga kwakadaro “masikati nousiku.” (Pisarema 1:1, 2) Kuita kudaro kunoda kuti tishande zvakati kuti. Asi kushanda kwose kworudzi irworwo kutamburira zviripo. Sezvinoratidzwa muChitsauko 18, Bhaibheri rakaita setsamba inokosha kwatiri inobva kuna Baba vedu vokudenga. Naizvozvo kuriverenga hakufaniri kuva musengwa. Tinofanira kuita kuti Magwaro ave mapenyu patinoaverenga. Tingaita sei kudaro?
8 Ona nhoroondo dzeBhaibheri mupfungwa sezvaunoverenga. Edza kuona vanhu vari muBhaibheri sevanhu chaivo. Edza kunzwisisa mararamiro avo, zvaiitika kwavari, nevavariro dzavo. Zvadaro fungisisa pamusoro pezvawaverenga, uchizvibvunza mibvunzo yakadai seyokuti: ‘Nhoroondo iyi inondidzidzisei pamusoro paJehovha? Unhu hwake hupi hwandinoona? Inhungamiro ipi iyo Jehovha anoda kuti ndidzidze, uye ndingaishandisa sei muupenyu hwangu?’ Verenga, fungisisa, uye shandisa—sezvaunodaro, Shoko raMwari rinova benyu kwauri.—Pisarema 77:12; Jakobho 1:23-25.
9. Ndiani “muranda akatendeka, akangwara,” uye nei zvichikosha kuti titeererese “muranda” iyeye?
9 Jehovha anotaurawo nesu achishandisa “muranda akatendeka, akangwara.” Seizvo Jesu akagara ataura, boka duku revarume vechiKristu vakazodzwa rakagadzwa kuti rigovere ‘zvokudya panguva yakafanira’ mumazuva ano okupedzisira anotambudza. (Mateu 24:45-47) Patinoverenga mabhuku akagadzirirwa kutibatsira kuwana zivo yeBhaibheri yakarurama uye patinopinda misangano yechiKristu nemagungano, tinenge tichipiwa zvokudya zvomudzimu nemuranda iyeye. Nokuti iro muranda waKristu, tinongwarira kushandisa mashoko aJesu okuti: “Chenjerai mateererere enyu.” (Ruka 8:18) Tinoteereresa nokuti tinoona muranda akatendeka seimwe yenzira dzaJehovha dzokukurukurirana nesu.
10-12. (a) Nei munyengetero uri chipo chinoshamisa chakabva kuna Jehovha? (b) Tinganyengetera sei nenzira inofadza Jehovha, uye nei tingava nechivimbo chokuti anokoshesa minyengetero yedu?
10 Asi zvakadini nokukurukurirana naMwari? Tinogona kutaura naJehovha here? Ipfungwa inotyisa. Kudai waizoedza kuenda kunoona mutongi ane simba kupfuura vose munyika yako kuti unotaura naye imwewo nyaya yako inokunetsa, paizova nomukana wakadini wokubudirira? Mune zvimwe zviitiko, kungoedza ikoko kungava kune ngozi! Mumazuva aEstere naModhekai, munhu aigona kuurayirwa kuenda kunoona mambo wePersia asina kudanwa naye kuti auye. (Estere 4:10, 11) Zvino fungidzira uchiuya pamberi paChangamire Ishe wezvinhu zvose, uyo kana kunyange vanhu vane simba zvikuru vachienzaniswa naye vakaita “semhashu.” (Isaya 40:22) Tinofanira kunyanya kutya kutaura naye here? Nyangwe!
11 Jehovha akagovera nzira yakavhurika, asi iri nyore yokusvika kwaari—munyengetero. Kunyange mwana mudukuduku anogona kunyengetera kuna Jehovha nokutenda, achiita kudaro muzita raJesu. (Johani 14:6; VaHebheru 11:6) Asi, munyengetero unotigonesawo kukwidza pfungwa dzedu nemafungiro edu akadzama—kunyange zvinorwadza zvatinowana zvakaoma kuzvitaura. (VaRoma 8:26) Hazvina zvazvinobatsira kuedza kuorora Jehovha nokutaura kwounyanzvi kwakarungwa kana kuti neminyengetero yakareba yokuwanza mashoko. (Mateu 6:7, 8) Ukuwo, Jehovha haaisi muganhu pakuti tingataura naye kwenguva yakareba sei uye kakawanda sei. Shoko rake rinototikokera richiti “rambai muchinyengetera.”—1 VaTesaronika 5:17.
12 Yeuka kuti Jehovha bedzi ndiye anonzi “Vokunzwa munyengetero,” uye anoteerera nokunzwira tsitsi kwechokwadi. (Pisarema 65:2) Anongoshivirira minyengetero yevashumiri vake vakatendeka here? Aiwa, chaizvo anotofadzwa nayo. Shoko rake rinofananidza minyengetero yakadaro nezvinonhuwira, izvo zvinoti zvikapiswa zvinoita utsi hunokwira kudenga, hunonhuwirira zvakanaka zvinozorodza. (Pisarema 141:2; Zvakazarurwa 5:8; 8:4) Hazvizorodzi here kufunga kuti minyengetero yedu yemwoyo wose inokwirawo saizvozvo ichifadza Changamire Ishe? Naizvozvo kana uchida kuswedera pedyo naJehovha, gara uchinyengetera kwaari nokuzvininipisa, mazuva ose. Dururira mwoyo wako kwaari; usavanza zvimwe. (Pisarema 62:8) Taura zvinokunetsa, zvinokufadza, kuonga kwako, uye kurumbidza kwako kuna Baba vako vokudenga. Zvichaita kuti chisungo chiri pakati pako navo chirambe chichisimba.
13, 14. Zvinorevei kunamata Jehovha, uye nei zvakakodzera kuti tidaro?
13 Patinokurukurirana naJehovha Mwari, hatisi kungoteerera uye kungotaura chete sezvatingaita neshamwari kana kuti hama yedu. Chaizvo tinenge tichinamata Jehovha, tichimupa rukudzo noruremekedzo zvaakafanirwa nazvo zvikuru. Kunamata kwechokwadi upenyu hwedu hwose. Ndiyo nzira yatinoratidza nayo kuna Jehovha rudo rwedu rwomweya wose nokuzvipira, uye kunobatanidza zvisikwa zvaJehovha zvose zvakatendeka, kungava kudenga kana kuti pasi pano. Pane zvaakaratidzwa, muapostora Johani akanzwa ngirozi ichizivisa murayiro uyu: “Ityai Mwari mumupe mbiri, nokuti awa yokutonga kwake yasvika, nokudaro namatai Iye akasika denga nepasi negungwa nezvitubu zvemvura.”—Zvakazarurwa 14:7.
14 Nei tichifanira kunamata Jehovha? Funga nezvounhu hwatakakurukura nezvahwo, hwakadai soutsvene, simba, kuzvidzora, ruramisiro, ushingi, tsitsi, uchenjeri, kuzvininipisa, rudo, ngoni, kuvimbika, uye kunaka. Takaona kuti Jehovha ndiye muenzaniso mukuru wounhu hwose hunokosha. Patinoedza kunzwisisa unhu hwake hwose, tinoona kuti anopfuura pakungova Munhu mukuru uye anoyemurika. Ane mbiri zvikuru, uye akakwirira panesu zvisingayereki. (Isaya 55:9) Pasina mubvunzo, Jehovha akakodzera kuva Changamire wedu, uye pasina mubvunzo akakodzera kunamatwa nesu. Zvisinei, tinofanira kunamata Jehovha sei?
15. Tinganamata Jehovha sei “nomudzimu nechokwadi,” uye misangano yechiKristu inotipa mukana wei?
15 Jesu akati: “Mwari Mudzimu, uye vanomunamata vanofanira kunamata nomudzimu nechokwadi.” (Johani 4:24) Izvi zvinoreva kunamata Jehovha nomwoyo wakazara nokutenda norudo, tichitungamirirwa nomudzimu wake. Kunorevawo kunamata mukuwirirana nechokwadi, zivo yakarurama iri muShoko raMwari. Tinova nomukana unokosha wokunamata Jehovha “nomudzimu nechokwadi” pose patinoungana nehama dzedu dzechiKristu. (VaHebheru 10:24, 25) Patinoimbira Jehovha tichimurumbidza, patinonyengetera kwaari takabatana, nokuteerera uye kupindurawo mukurukurirano dzeShoko rake, tinoratidza kumuda kwatinoita mukunamata kwakachena.
Misangano yeungano inguva dzinofadza dzokunamata Jehovha
16. Ndoupi uri mumwe wemirayiro mikuru yakapiwa vaKristu vechokwadi, uye nei tichinzwa tichisungirwa kuuteerera?
16 Tinonamatawo Jehovha patinotaura nezvake kune vamwe, tichimurumbidza pachena. (VaHebheru 13:15) Chokwadi, kuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaJehovha ndomumwe wemirayiro mikuru yakapiwa vaKristu vechokwadi. (Mateu 24:14) Tinoda zvikuru kuteerera nokuti tinoda Jehovha. Patinofunga nezvenzira iyo “mwari wegadziriro ino yezvinhu,” Satani Dhiyabhorosi, ‘akapofumadza nayo pfungwa, dzevasingatendi,’ achitsigira nhema dzine ngozi pamusoro paJehovha, hatinzwi here tichida kwazvo kushumira seZvapupu zvaMwari wedu, tichiruramisa kuchera kwakadaro? (2 VaKorinde 4:4; Isaya 43:10-12) Uye patinofunga nezvounhu hwaJehovha hunoshamisa, hatinzwi chido chichikura matiri here chokuudza vamwe nezvake? Chokwadi, hapangagoni kuva neropafadzo huru kupfuura kubatsira vamwe kusvika pakuziva nokuda Baba vedu vokudenga sezvatinoita.
17. Ko kunamata kwedu Jehovha kunobatanidza chii, uye nei tichifanira kunamata nokuvimbika?
17 Kunamata kwedu Jehovha kunosanganisa zvakatowanda. Kunobata mativi ose oupenyu hwedu. (VaKorose 3:23) Kana tikagamuchira Jehovha zvechokwadi saChangamire Ishe wedu, ipapo tichatsvaka kuita kuda kwake muzvinhu zvose—muupenyu hwedu hwemhuri, mubasa redu rokunyika, mukubata kwedu nevamwe, munguva yedu tiri toga. Tichatsvaka kushumira Jehovha “nomwoyo wakarurama,” nokuvimbika. (1 Makoronike 28:9) Kunamata kwakadaro hakusiyi mukana wemwoyo miviri kana kuti upenyu huviri—mararamiro ounyengeri okuratidza sounoshumira Jehovha asi uchiita zvivi zvakakomba pachivande. Kuvimbika kunoita kuti zvisabvira kuva nounyengeri hwakadaro; rudo runoita kuti husembure. Kutya Mwari kuchabatsirawo. Bhaibheri rinobatanidza kutya kwakadaro nokuramba kwedu tiri pedyo naJehovha—Pisarema 25:14.
18, 19. Nei zvichibvira kufunga kuti vanhuwo zvavo vasina kukwana vanogona kutevedzera Jehovha Mwari?
18 Chikamu chimwe nechimwe chebhuku rino chinoguma nechitsauko chinotaura nezvokuti tingava sei “vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa.” (VaEfeso 5:1) Zvinokosha kuyeuka kuti kunyange zvazvo tisina kukwana, tinogona kutevedzera zvechokwadi nzira yaJehovha yakakwana yokushandisa simba, yokururamisira, yokuita nouchenjeri, uye yokuratidza rudo. Tinoziva sei kuti zvinobvira zvechokwadi kutevedzera Wemasimba Ose? Yeuka, zvinoreva zita raJehovha zvinotidzidzisa kuti anozviita kuti ave chero zvaanenge asarudza kuitira kuti azadzise zvinangwa zvake. Zvakakodzera kuti tinoshamiswa nemano iwayo, asi hazvibviri zvachose kuti timutevedzere here? Aiwa.
19 Takasikwa nomufananidzo waMwari. (Genesi 1:26) Nokudaro, vanhu havana kufanana nezvimwe zvisikwa zvose zviri pasi pano. Hatiiti zvinhu tisingashandisi pfungwa, kana kuti nokuda kwokutodza kwatakaita vabereki, kana kuti pamusana pezvimwe zvinhu zvakatikomberedza. Jehovha akatipa chipo chinokosha—rusununguko rwokuzvisarudzira. Nyangwe zvazvo tine zvimwe zvatisingagoni uye tisina kukwana, takasununguka kusarudza zvatichava. Unoda kuva munhu ane rudo, akachenjera, anoruramisa uye anoshandisa simba rake zvakarurama here? Nokubatsira kwomudzimu waJehovha unogona kuva akadaro chaizvo! Funga nezvezvakanaka zvauchaita nokuita kudaro.
20. Ndezvipi zvakanaka zvatinoita patinotevedzera Jehovha?
20 Uchafadza Baba vako vokudenga uchiita kuti mwoyo wavo ufare. (Zvirevo 27:11) Unogona kunyange kuto“fadza kwazvo” Jehovha nokuti anonzwisisa zvausingagoni. (VaKorose 1:9, 10) Uye sezvaunoramba uchiwedzera unhu hwakanaka mukutevedzera Baba vako vanodiwa, uchakomborerwa neropafadzo huru. Munyika yakasvibirwa yakazviparadzanisa naMwari, uchava mutakuri wechiedza. (Mateu 5:1, 2, 14) Uchabatsira kuparadzira kusvika kure pasi pano mufananidzo wounhu hwaJehovha hune mbiri. Kukudzwa kwakadini!
Dai ukaramba uchiswedera pedyo naJehovha
21, 22. Mufaro wei usingagumi wakamirira vose vanoda Jehovha?
21 Zvinokurudzirwa pana Jakobho 4:8 hazvisi zvokungomhanyira kuti ndinoda kuita chete. Runotova rwendo chairwo. Chero bedzi tikaramba takatendeka, rwendo irworwo haruzombogumi. Hatizombomiri kuramba tichiswedera pedyo naJehovha. Pamusoro pazvo, kuchangoramba kune zvakawanda zvokudzidza pamusoro pake. Hatifaniri kufungidzira kuti bhuku rino ratidzidzisa zvose zvatinofanira kuziva pamusoro paJehovha. Chokwadi, takangoita sokuti hatisati tatanga kukurukura zvose izvo Bhaibheri rinotaura pamusoro paMwari wedu! Kunyange Bhaibheri pacharo haritiudzi zvose zvatinofanira kuziva pamusoro paJehovha. Muapostora Johani akafungidzira kuti kudai zvinhu zvose zvakaitwa naJesu munguva youshumiri hwake hwepasi pano zvaizonyorwa, “nyika yaisagona kukwana mipumburu yacho.” (Johani 21:25) Kana zvinhu zvakadaro zvaigona kutaurwa pamusoro poMwanakomana, zvakatopfuura ipapo sei nezvaBaba!
22 Kunyange upenyu husingaperi hauzombotisvitsi pamugumo wokudzidza nezvaJehovha. (Muparidzi 3:11) Saka, funga nezvetariro iri mberi kwedu. Pashure pokurarama kwemazana, zviuru, mamiriyoni, kunyange mabhiriyoni emakore, tichaziva zvakawanda nokure nezvaJehovha Mwari kupfuura zvatinoita zvino. Asi ticharamba tichingonzwa kuti kune zvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki zvinoda kudzidzwa. Tichave tichida zvikuru kudzidza zvakawanda, nokuti ticharamba tichingonzwa tine chikonzero chokunzwa sezvakaita munyori wepisarema uyo akaimba kuti: “Kuswedera pedyo naMwari ndizvo zvinondifadza.” (Pisarema 73:28) Upenyu husingaperi huchave hwakapfuma zvisingafungidziriki uye hune zvinhu zvakasiyana-siyana—uye kuswedera pedyo naJehovha kucharamba kuchingova chikomborero chikuru pazvose muupenyu hwacho.
23. Chii chaunokurudzirwa kuita?
23 Dai waita chimwe chinhu norudo rwaJehovha zvino, nokumuda nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nepfungwa dzako dzose uye nesimba rako rose. (Mako 12:29, 30) Dai rudo rwako rukava rwakavimbika uye rusingazununguki. Dai zvisarudzo zvaunoita zuva nezuva, kubva pazviduku pazvose kusvika pazvikuru pazvose, zvose zvaratidza kutungamirira kwomurayiro mumwe chete iwoyo—kuti nguva dzose ugosarudza nzira inotungamirira kuukama hwakasimba naBaba vako vokudenga. Pamusoro pezvose, dai ukaramba uchiswedera pedyo naJehovha, uye dai iye akaramba achiswedera pedyo newe—kusvika nokusingaperi!
Pisarema 25:1-22 Tingaswedera sei pedyo naJehovha, uye chivimboi chatingava nacho somugumisiro?
Hosea 6:3 Ndima iyi inoratidza sei kuti kusvika pakuziva Jehovha kunoda kushandirwa uye kunounza zvikomborero?
Mateu 16:21-27 Kana tichizotevedzera Jehovha, muenzaniso waani watinofanira kutevera, uye tinofanira kuratidza mafungiro akadini?
Zvakazarurwa 21:3, 4 Sezvaunofungisisa zvikomborero zvomunguva yemberi izvo Jehovha achaunza, izvi zvinokuita kuti unzwe kuda kuitei nazvo?
Tine ropafadzo yokuva chikamu chesangano raMwari riri kudenga nepanyika. Tingaratidza sei kuti tinotsigira basa rariri kuita mazuva ano?
Jehovha Mwari anokuda zvechokwadi. Ungaratidza sei kuti unomuda nemararamiro aunoita?